Iconic Eurail Pass dia namboarina miaraka amin'ny fihenan'ny vidiny mbola tsy nisy toy izany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Netherlands » Iconic Eurail Pass dia namboarina miaraka amin'ny fihenan'ny vidiny mbola tsy nisy toy izany
Eurail, ny Pass-all-in-one Pass izay manome ny fidiran'ny mpandeha any amin'ny lamasinina be indrindra any Eropa, dia nanambara ny fivoaran'ny vokatra miovaova, anisan'izany ny fihenan'ny vidiny sy ny fanitarana sorona nanomboka ny volana Janoary 2019. Ireo fanovana feno ireo no manan-danja indrindra amin'ny tantaran'i Eurail 60 taona, izay mandray soa isaky ny karazana mpandeha.
Miaraka amin'ireo fanovana ireo, ireo mpitsangatsangana manararaotra ny Eurail dia manana fotoana hiaina toerana 40,000 manerana an'i Eropa amin'ny fomba mahomby sy ara-toekarena kokoa noho ny teo aloha. Ny manamarika indrindra dia izao, ny Eurail dia hanome fidirana voalohany any Great Britain, ary koa i Makedonia sy Litoania, hanitatra ny isan'ny firenena amin'ny 28 ka hatramin'ny 31. Ary miaraka amin'ny fanampiana mpitatitra fiarandalamby vaovao dimy ho an'ny portfolio an'i Eurail, dia efa Safidy làlana misimisy kokoa ao Eoropa mahaliana anao.
Miorina amin'ny etos Eurail izay natsangana tamin'ny fanombohany tamin'ny 1959, ny fanamorana ny fivezivezena sy ny fahafaha-mividy no singa lehibe amin'ny fanovana ny vokatra. Ho an'ny 2019, Eurail dia misotro ronono ny Pass-Multi-Country Pass (firenena 2-4) ho fampiroboroboana ny Passes Global sy One Country. Samy hahita ny fihenan'ny vidiny izy roa, manome ny mpandeha hatramin'ny 37 isan-jato amin'ny kilasy fitsangatsanganana isan-karazany ao anatin'izany ny Senior (mihoatra ny 60 taona), ny tanora (hatramin'ny 27 taona) ary ny safidy kilasy faha-2 vaovao. Ny hetsika dia miteraka fahatakarana bebe kokoa ny safidin'ny vokatra: ny fahaizana mifindra moramora amin'ny firenena eropeana 31 amin'ny fialam-boly na mijanona ao anatin'ny fari-tanin'ny firenena iray, iray fotsiny ny Pass.
"Manantena izahay fa ny fanamafisana ny fanolorana Pass ho fanovana an-tanan-droa na ny mpanjifa na ny mpiasan'ny dia," hoy i Clarissa Mattos, Manager amerikana amerikana sy Pasifika ao Eurail. "Ny fitomboan'ny fahazavana sy ny mangarahara amin'ny safidin'ny vokatra dia mahatonga ny drafitra fitsangatsanganana eoropeanina ho mora sy mora kokoa noho ny hatramin'izay amin'ny Eurail."
Misongadina amin'ny fivoaran'ny vokatra Eurail ny:
Tafakatra 31 ny fidirana amin'ny firenena
Grande-Bretagne - Atolotra amin'ny Global Pass.
Ny fampidirana ny Eurostar ao amin'ny portfolio an'i Eurail dia mampifandray an'i Londres amin'ireo tanàna eropeana lehibe toy ny: Amsterdam, Avignon, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Paris ary Rotterdam.
Makedonia - Atolotra amin'ny fandalovan'ny firenena sy ny firenena iray.
Litoania - Atolotra amin'ny Global Pass.
Ny fihenan'ny vidin'ny Passes eran'izao tontolo izao hatramin'ny 37% ary ny fandaniana amin'ny firenena iray mora vidy kokoa
Fanampin'ny sokajy zokiolona (60 taona mahery) ho an'ny karazan-tsambo
10% amin'ny saran-dalan'ny olon-dehibe
Ny vidin'ny sokajy tanora (hatramin'ny 27 taona) mihena ho an'ny Global Passes
23% ny saran-dalan'ny olon-dehibe ho an'ny kilasy iray ihany
Fanampin'ny safidy kilasy faha-2 amin'ny Passes Global Adult rehetra
Ny fahasamihafana 25% eo amin'ny kilasy voalohany sy faharoa
Fanampian'ny Pass Greek Islands vaovao
Nosy feno Grika 53. Cyclades (Nosy 21), Dodecanese (Nosy 12), Sporades (Nosy 3), Nosy Saronic (Nosy 7), Nosy NE Aegean (Nosy 9), ary Kreta.
Vaovao farany momba ny mpitatitra
Vondrona fanaterana ny lalamby